Imikhumbuzo neminikelo ngezandla
Izikhumbuzo nezipho njalo ziletha injabulo. Izipho ezenziwe ngezandla zabo - lokhu kuyamangalisa kumuntu. Yingakho abaningi bethu benza izinkumbulo ngezandla zethu. Kodwa, kanjani ukwenza izinkumbulo nezipho ngezandla zabo siqu, ukuze zibukeke zangempela futhi zingaba usizo emndenini?
Ukuze uhlanganyele ekwenzeni izikhumbuzo nezipho ngezandla zakho, akudingeki ube namathalenta akhethekile. I-Souvenirs ingenziwa kusuka kunoma iyiphi indlela ehlongozwayo. Into eyinhloko ukuthi ubeka umphefumulo wakho kulezi zipho. Isibonelo, ungenza ozimele, amabhokisi, izithombe nama-collage ngezandla zakho. Zonke izipho ezisekuqaleni, zizokhunjulwa njalo umuntu ozinikela kubo. Lezi zikhumbuzo zikhuluma ngesimo sakho sengqondo esikhethekile. Phela, uma umuntu enza okuthile ngezandla zakhe, khona-ke lowo muntu akamkhathaleli futhi ulungele ukuchitha isikhathi namandla phezu kwalesi sipho. Mhlawumbe othile ucabanga ukuthi kungcono ukuhamba nokuthenga okuthile okubizayo esitolo. Kodwa eqinisweni, ayikho igolide eyothatha indawo esiyibeka ngempela umphefumulo wethu.
Ngakho-ke, yini ongayicabangela yokujabulisa umuntu? Isibonelo, ungakwazi ukulalela umdwebo. Futhi ungasho ukuthi awukwazi ukudweba nhlobo. Ungahlala uthola indlela yokuphuma kule simo. Isibonelo, uma unesikhathi, iya emakilasini amaningana aphezulu, lapho abantu bafunda khona izinto eziyisisekelo zemidwebo futhi babasize bathole abaculi. Uma usebenza kanzima futhi ulalele ngokucophelela umholi, ngezifundo ezimbalwa ungakwazi ukudweba isithombe esihle futhi unikeze othandekayo. Yiqiniso, akusoze kube yinto ebuciko obuhle, kodwa ngakolunye uhlangothi, kuyoba mnandi kumuntu oye wamzama, wachitha amandla akho, isikhathi namandla. Udinga nje ukukhetha isihloko esifanele esithombeni, esiqinisekisayo sokujabulisa umuntu oya kuyo ukunikeza umsebenzi wakho. Kungaba yindawo yolwandle noma yezintaba, imigwaqo yedolobha ethandekayo, izimbali, imifula namachibi. Mhlawumbe isithombe sakho sizokwenziwa ngesitayela samanje noma ngaphambi kwe-gardens. Into eyinhloko ukuthi umuntu uyayithanda ngempela. Ngakho ungapende lokho okuthandayo. Kungcono ukubuza kusengaphambili futhi ubonise kahle ukuthi yini ezoletha injabulo emehlweni omthandekayo wakho.
Yiqiniso, kunzima kakhulu ukudweba isithombe ngokwakho. Kodwa ungakwazi ukuveza kahle imidwebo enhle. Eqinisweni, akuzona ukuthi kunzima ukudweba. Futhi ngaphansi kwesiqondiso esiqinile somculi wezobuchwepheshe ungabonisa othandekayo ngendlela ehlekisa futhi ethakazelisayo. Khumbula ukuthi uyazi izici zesimo sobuso. Imvelo nobumnene bomthandekayo wakho. Ngakho-ke, kulula kuwe ukuba ubonise isimo sakhe esithombeni bese uyidlulisa ngokuhlekisa futhi ngokuthakazelisayo. Umculi uzokukhuthaza kuphela ukuthi ungalungisa kanjani amaphutha obuchwepheshe, futhi ungayibumba ephepheni futhi ubonise isithombe nobuntu bomngane wakho, isihlobo noma othandekayo.
Uma ungakwazi ukudweba, isipho sakho asikwazi nje isithombe. Umdwebo wekamelo lonke. Vumelana, noma yimuphi umuntu ufuna ukuhlala ekamelweni langempela. Ungenza isipho esinjalo kumuntu othandekayo wakho. Kudingekile ukuba ucabange kanye nomnikazi wekamelo ukuthi yini angathanda ukuyibona ezindongeni zakhe futhi aqonde amaphupho akhe. Eqinisweni, ngamunye wethu uyakujabulela ukuvuka, ubuke ikhaya lakho futhi uqonde ukuthi konke okuhle okusizungezile ngumsebenzi womuntu othandekayo nothandekayo oye wafaka amakhono akhe namandla akhe ekwenzeni ikhaya libe yinto ethile Amazing, original futhi ezingenakulibaleka.
Yiqiniso, ukudweba nokudweba - lesi akusona isipho kuphela esingenziwa ngezandla zakho futhi sinikezwe othandekayo. Kunezinye izinketho ezihlukahlukene. Phakathi kwabo unga, isibonelo, shayela isipho esinjalo ngezandla zakho, njenge-casket yangempela. Eqinisweni, kulula kakhulu ukukwenza. Udinga nje ukuthatha ibhokisi elijwayelekile nezinto zokwakha, okuzobonisa ukuthi yini okungenzeka uyijabulise noma intshisekelo othandekayo wakho. Ibhokisi elinjalo lingaba, isibonelo, elifakwe ngezithombe zomndeni zakudala. Vumelanani, ngoba kuzo zonke izindlu kunezinhlobo ezifanayo zomndeni. Ngaphandle komlando womndeni, ngaphandle kokudlulile, akusoze kube khona ikusasa langempela. Futhi kulezi zithombe ukuthi konke okudlule, izindaba zethu kanye nezindaba zokhokho bethu zigcinwa. Ngakho-ke, ukuze uthole izithombe zomndeni, ungenza ibhokisi, lifakwe ngezithombe ezindala. Into esemqoka ukuthi usebenze ngokucophelela ukuze ungaphazamisi izithombe eziyigugu futhi ungamcasuli umuntu okwenzayo konke lokhu.
Yiqiniso, ukuthwebula izithombe akuyona kuphela inketho yokuhlobisa ikhekhethi. Futhi, ungakhetha imidwebo ehlukahlukene nemifanekiso ezoletha ngokunembile injabulo. Ngemuva kokuthi ikhaphethi idliwe, kufanele ihlanganiswe nesendlalelo se-lacquer-decoupage esicacile. Kungathengwa nanoma yisiphi isitolo esinobuciko bokusebenza kwezobuciko.
Futhi, ungenza i-albhamu enhle engxenyeni ye-lacquered. Isipho esinjalo asifaneleki kuphela izihlobo, kodwa nabangani. Kulula, ngoba owokuqala ungakwazi ukuqoqa izithombe ze-albhamu zobusha bawo. Kodwa abangane njengemifanekiso yakho yasekuqaleni nehlekisayo yeminyaka ehlukene. Sonke sithanda ukusabalala ngama-albhamu futhi sikhumbule konke okwenzeka kithi kanye, qedela le mizwelo bese uxoxisana nabathandekayo. Ukuze wenze i-albhamu, uqale udinga ukusika izithombe zakho bese unamathisele emgodleni nokumboza. Khona-ke, thatha ishidi lamaphepha alula bese usika isikwele. Yibambe esiteji segolide, esizoba nobukhulu obukhulu kakhulu. Esigabeni sephepha, bhala isihloko sesifiso noma i-nadris ehlekisayo, ezobonisa okuqukethwe kwe-albhamu, bese unamathisela isikwele esihlanganisiwe ekhava le-albhamu. Ekupheleni, faka ikhava kanye nomgogodla nge-varnish-decoupage. Ngakho-ke, uzothola isipho esihle nesasendulo esenziwe wena.
Ukubuyekezwa kwe "Indiana Jones noMbuso we-Crystal Skull"
Yeka ukungazikhohlisi ngokuzungezile ku-disco foamy
Ama-biscuits e-Chocolate nge-fillings ongakhetha kuwo
Ukuvuselelwa okuncane okungabonakali ebusweni
Izinkinga ngamazinyo kwabesifazane abakhulelwe
Izifo ezibangelwa ukungondleki ezinganeni
Amabhethri abhekene nezingane
Isobho se-ushi nelayisi